A hụrụ mbara igwe ọhụrụ buru ibu nke na-ekpuchi Jupita dị nso - BGR - TELES RELAY
A hụla mbara ụwa ọhụrụ buru ibu nke juputara Jupita dị nso - BGR
Na sistemụ mbara igwe anyị, Jupiter bụ eze. Ọ buru ibu karịa mbara ala ndị ọzọ na sistemụ anyị, ọ kpuchiri .wa kpamkpam. Mana nnukwu atụmatụ nke ihe, Jupita enweghị nnukwu ọfụma. Ọ buru nnukwu ibu, mana, ma e jiri ya tụnyere ndị gas ndị ọzọ dị n'ọhịa osisi galactic anyị, ọ bụ obere mmadụ.
Ndị nyocha na-eji data nke nyocha nke mbara igwe nke Gaia choputara nnukwu ikuku na-adịghị anya site na whichwa nke na-ama Jupiter ụta. Ọ bụghị obere ka nnukwu ikuku anyị dị nso ... ọ gbara ihe ruru okpukpu iri. Ee, o buru oke ibu, ma ọ fọdụ naanị afọ 330 dị mfe site na .wa.
Uwa ohuru a choputara, nke a maara dika 2MASS 1155-7919 b, bu nwa ohuru n’uche omuma nke uwa ma kewa kpakpando ya n’ebe di anya. Kpakpando ahụ n'onwe ya dịkwa obere, na ndị nchọpụta na-ekwu na ọ dị naanị afọ nde ise. Na ntụle, anyị Sun na-eme atụmatụ karịa 4,6 ijeri afọ.
Nchọpụta ahụ na-enye ndị na-enyocha mbara igwe ohere pụrụ iche iji lelee nnukwu gas n'oge ndụ ya, na-agbagharị gburugburu kpakpando ya na-eto eto ma malite nnọọ ndụ ya. Ọbụlagodi na ugboro iri nke Jupita, ọ na-aga n'ihu na-eto ma ga-abụ nke buru oke ibu.
"Ihe gbara ọchịchịrị na nke dị jụụ anyị chọtara dị obere ma bụrụ naanị ugboro iri nke Jupita, nke pụtara na anyị nwere ike na-ele ụwa nke nwa ọhụrụ, ikekwe ka nọ n'etiti ntolite", Annie Dickson-Vandervelde, onye edemede ukwu nke nyocha ahụ, kwuru na nkwupụta.
"Ọ bụ ezie na achọpụtara ọtụtụ mbara ala ndị ọzọ site na ozi Kepler na ndị ọzọ yiri ya, ihe niile bụ" mbara "ochie. Ọ bụkwa naanị ihe atụ nke anọ ma ọ bụ ise nke nnukwu mbara ụwa dị anya site na kpakpando "nne" ya, ọ na-esiri ndị isi ike ịkọwa etu ha siri guzobe ma ọ bụ jedebe ebe ahụ. "
Isi mmalite nke onyonyo: NASA / JPL-Caltech / R. Injury (SSC-Caltech)
Mike Wehner akọpụtala banyere teknụzụ na egwuregwu vidiyo n'ime afọ iri gara aga, na-ekpuchi akụkọ na usoro ọhụụ na ezigbo usoro, uwe, smart na teknụzụ n'ọdịnihu.
N'oge na-adịbeghị anya, Mike bụ onye na-ahụ maka teknụzụ maka Daily Dot ma bụrụ onye e gosipụtara na USA Today, Time.com na ọtụtụ weebụsaịtị ndị ọzọ na ebipụta. Ima ima
akụkọ ahụ nọ n’azụ riri ya ahụ́ nke ịgba chaa chaa.
Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara usoro iji mezie DNA site na…
Akụkọ a sitere n'ime ntọala nke…
Nkịta nwalere ihe dị mma maka coronavirus, mana onweghị onye maara…
Nke a bu ụzọ pụta (na Bekee) BGR
Google na-eme ka ndị nledo ngwa gam akporo
Ndị uwe ojii na-egbu nkịta n'okporo ụzọ iji gbochie ha ịgbasa "coronavirus - SANTE PLUS MAG
Ndị ọkà mmụta sayensị na-achọpụta usoro iji dozie DNA mmadụ ...
Akụkọ a sitere na etiti ntọala nke ọrịa nje coronavirus…
Nkịta nwalere ihe dị mma maka coronavirus, mana onweghị onye ma ihe nke ahụ…
Ndi okacha mara sayensi mechara gbawaa oke?